थप ५ जनामा कोरोना, संक्रमितको संख्या २५० पुग्यो – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/थप ५ जनामा कोरोना, संक्रमितको संख्या २५० पुग्यो
जेठ, काठमाडौं । नेपालमा थप ५ जना कोरोना स्रक्रमित थपिएका छन् । योसँगै स्रक्रमितको जम्मा संख्या २५० पुगेको छ ।सर्लाहीका १, धनुषामा र महोत्तरीका २/२ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रलायले जानकारी दिएको छ ।
थपिएका संक्रमित मध्ये चारजना पुरुष र एकजना महिला हुन् । उनीहरुको स्वाब परीक्षण राष्ट्रिय जनस्वास्थय प्रयोगशाला, काठमाडौंमा गरिएको थियो ।
कोरोनाका कारण स्थगन गरिएको सिरी ए लिग जुन १३ बाट निरन्तर गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ । यसका लागि इटाली सरकारले स्वीकृति दिन भने बाँकी छ ।भिडियो कन्फेरेन्समार्फत लिगको बुधबार बसेको बैठकले जुन १३ को नयाँ मिति तय गरेको हो । लिगका सबै क्लबले सरकारले तोकेका नियम पूर्ण पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
इटालीमा मे पहिलो सातादेखि खेलाडी व्यक्तिगत प्रशिक्षणमा उत्रिसकेका छन् । कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीका कारण लिग मार्च ९ बाट रोकिएको थियो । लिगमा १२ चरण र चार खेल अझै खेल्न बाँकी छ ।युभेन्ट्स लिग तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ । दोस्रो स्थानको लाजियोको एक अंक कम छ । टिमले सोमबारबाट प्रशिक्षक सुरु गर्नेछन् ।
बालुवाटारसँगै देशभरि ठाउँ-ठाउँमा प्रदर्शन, नो पिसिआर, नुन तेल बेसार कोरोनाको उपचार- डा. केपी ओली
आज कहाँ कहाँ पानी पर्छ ? हेर्नुहाेस मौसम पूर्वानुमान